Hiran State - News: HS:- kulankii waftiga R/wasaaraha dowlada Soamliya ku tagay Hiiraan.
HS:- kulankii waftiga R/wasaaraha dowlada Soamliya ku tagay Hiiraan.
HS:- Wararka caawa iyo kulankii waftiga R/wasaaraha dowlada Soomaaliya uu la yeeshey waxgaradka Hiiraan.
Inkasta oo ay magaalada Belet Weyne aheyd magaalo ay koox argagixiso ah ka talineysay mudo dheer hadane waxgaradka, siyaasiyiinta iyo waliba qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan waxey maanta u soo dhaweyeen waftigii uu hogaaminayey R/wasaaraha Soomaaliya Professor C/wali Mohamed Ali (Gaas) intii karaankooda aheyd.
Waftiga R/wasaraha oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano, wasiiro iyo saraakiisha ciidamada dowlada ayaa ka degay xili barqo ah garoonka diyaaradaha Ugaas Khalif ee magaalada Belet Weyne. r/wasaaraha iyo waftigiisa ayaa loogu soo dhaweyey halkaasi si niyad furan oo Somalinimo leh maadama ay TFGdu iyadu dayaceen shacabka Hiiraan hadane R/wasaaraha iyo waftigiisa ayaa siweyn loo dareensiiyey iney joogaan dhulkoodii hooyo.
Bal aanu dul marnno kulankii R/wasaaraha iyo waftigiisa la yeesheen bulsahda Hiiraan.
Kadib markii ay soo caga dhigatay diyaaradii sidey r/wasaaraha iyo waftigiisa waxey si toos ah ula kulmeen xildhibaanadii ku sugnaa Hiiraan ee buuraha saarnaa mudada dheer ee la noolaa ciidamada xoogaga Hiiraan ,shirkaanina waxaa si gooyni ah mudo lagu qiyaasay 2 saac uu ahaa mid ay albaabadu u xirnaayeen waxaana masuuliyiintii ka socotay TFGda,xildhibaanadii ku sugneyd Hiiraan iyo waliba saraakiil ka socotay dowlada Ethiopia isla meel dhigeen amaba gorfeeyeen xaalada guud ee dalka gaar ahaan Hiiraan.
Xildhibaanadii ku sugnaa Hiiraan oo u muuqday kuwo xaqiiqada Hiiraan taala iyo dhibtii ay ciidamadu soo mareen siweyn ula socday ayaa laga dhageystay warbixin qaataday ku dhawaad 1 saac oo ka yaabisay waftigii uu hogaaminayey R/wasaaraha Soomaaliya. Intaasi kadib waxaa hadalka qatay R/wasaaraha Soomaaliya C/wali Gaas ugana mahadceliyey bulshada Hiiraan guushii ay gaareen kadib markii ay ka saareen kooxdii argagixisada aheyd magaalada Belet Weyne iyo nawaaxigeeda iyagoona balan qaaday iney waxkasta oo ay awoodaan la soo gaari doonaan bulshada Hiiraan.
Intaas kadib waxaa hadalka qaatay oo ka hadlay mowqifkooda saraakiisha ciidamada Ethiopia kaka sugan Hiiraan oo sheegeen in ay markasta diyaar u yahiin sidii ay dowlada garab ugu siin lahaayeen la dagaalanka waxa ay ugu yeereen argagixisada iyagoona sheegay iney dagaalka sii wadayaan inta ay ka xaqiijinayaan amaanka.
Markii ay dhamaan hadleen xildhibaanada, waftiga R/wasaaraha iyo saraakiisha Ethiopia ayaa leysku soo qaaday qodob xasaasi ahaa sida laga yeelayo maamul u sameynta Hiiraan. waxaana leysla gartay in TFGda waxii arimahaas ku saabsan ay wakiil uga yahiin xildhibaanada Hiiraan jooga iyadoona ay xildhibaanadu dowlada u shegeen in talada loo daayo bulshada Hiiraan waxaana leysla gartay in xildhibaanadii horey u joogay iyo kuwo maanta ka haray waftigii R/wasaaraha ay howshooda meesha ka sii wadaan iyagoo la tashanayo waxgaradka, aqoonyahanada, iyo waliba qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan.
Intaa kadib waxaa soo gabo gaboobay shirkii ay sida gooynida ah u lahaayeen waftigii r/wasaaraha, saraakiisha Ethiopia ka jooga Hiiraan iyo waliba xildhibaanadii ku sugnaa Hiiraan waxaana ay dhamaantood oo wada socda shirweyn ku qabteen xarunta jaamada Hiiraan oo ay ku sugnaayeen waxgaradka Hiiraan, aqoonyahano, culimo iyo saxaafada Soomaalida.
Guud ahaan shirkii maanta waxuu ahaa mid bilaaw fiican u leh TFGda iyo bulshada Hiiraan iyadoona sida muuqata reer Hiiraan loo madax banaaneeyey arimahooda iyadoo shirweyne guud la qaban doono kaasi oo ay hormuud ka noqon doonaan Ugaasyada, Wabarada, suldaanada iyo Salaadiinta Hiiraan oo gaashanaya nabadoonada. kadibna howlaha intooda kale halkaas ayaa laga amba qaadi doonaa mustaqbalka dhaw si loo helo maamul adag oo ay reer Hiiraaan mahadiyaan xirir dhawna la leh hadba dowladii markaasi ka jirta dalka hadey noqon laheyd TFGda hada jirta amaba mida iyada bedeli doonta ee lagu wado iney noqon doonto dowlad rasmi ah waxii ka danbeeya bisha 8aad ee sanadkan.
Ugu danbeyn waftiga R/wasaaraha ayaa waxey balan qaadeen iney la soo gaari doonan shacabka Hiiraan dhawaantan kaalmooyin kala duwan, iyagoona halkaas ku riiqay qado sharaf ugu danbeyna si nabadgalyo ah uga dhoofay magaalada Belet Weyne.
Insha alaah waxey u muuqataa in madaxweynaha Soomaaliyana soo dhaweyn intaan ka balaaran loo sameyn doono marka la helo xili munaasib ah oo Shabaab laga saaro guud ahaan Hiiraan.
· admin on January 07 2012 04:03:20 · 0 Comments · 2120 Reads ·
14,613,409 unique visits